Le nkonzo online free. Kwakusembiwa kuyo, ngezigodo
Ukubalwa ukombiwa kugrunjwe ngenxa
isikali umzobo 1: 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Khankanya milinganiselo ngeemitha
Khankanya ixabiso lomsebenzi ekumbiwe
ngokomba (1 cubic meter)
umhlaba lokungemva (1 cubic meter)
B - ubunzulu kusimbiwa
Y - ubude emhadini
X - ububanzi emhadini
ngezigodo Construction - olitshivela emhadini isiseko, yokudada okanye ichibi, umsele kuba ozilawulayo endlwini yelizwe amdaka, ehambisa okanye Indlu amanzi.
Ekulungelelaniseni imiqulu ukumbiwa lomhlaba Lagrunjwa kubaluleke kakhulu ukuba ukuhlola kakuhle.
Iindleko kumbiwa ibandakanya bembe kuloo umsele okanye kusimbiwa nokususwa zomhlaba. Kuyimfuneko ukuba isicwangciso intshukumo ongaphezulu umaleko womhlaba ukuze zisetyenziswe kwixesha elizayo egadini okanye yemifuno egadini. Ukukhulelwa yinxalenye Umhlaba osetyenziswa ilungelelanise site, isiseko ingxelo zokulala okanye asuswayo-site. Ziindawo ngokususwa umhlaba emiselwe kwangaphambili.
Kananjalo qaphela ukuba amaxabiso 1 cubic meter ukombiwa kudla kwandisa ngobunzulu umsebenzi. Ekubeni ixabiso wobuso kubunzulu wemitha 1 imitha 1 enzulu kwaye zisenokwahluka kanye nakabini. Ukuqhubeka umhlaba kudla ngumcimbi eyahlukileyo yenkcitho. Ukwenzela ukuba lihlawule iindleko ezingalindelekanga, izakubonisa yonke kwangaphambili kunye nenkampani.
Cinga kwimpahla kwi isixa kugrunjwa ku ukufakela formwork xa baphalaza isiseko.
Manual okanye ntshukumo?
Nganye kwezi ndlela zinamanqaku angalunganga.
Xa zingenziwa ukusebenza ngesandla emhadini ngokuchane ngakumbi.
Ngamandla hono-iindleko kunye nezixa ezincinane iindleko lokugqibela imveliso yi mingxuma ngesandla kunokuba ngaphantsi xa ukuqesha umntu ntshukumo kunye nezinye ngoomatshini. Lula ukumilisela ulawulo ubungakanani nejiyometri emhadini.
Nangona kunjalo, imali ebonakalayo lomhlaba kunye nesantya ntshukumo idla uphumelela. Kuyo nayiphi na imeko, isigqibo Kuxhomekeke kuwe.
Inkqubo ye ngezigodo.
Okokuqala kufuneka uphawule indawo emhadini okanye wawakhotha. Ukwenza oku, phezu komhlaba kunye nezikhonkwane nomtya obhityileyo zibonisa indawo yomsebenzi. Ukulawula geometry we walinganisa imigca emibini ngekamva emhadini - ke mazingqinelane.
Nangona kunjalo, le indlela mgaqweni yaye ilungele inches okanye umhlaba tyaba yokumakisha.
Kuba ngezigodo kuyilo oluchanileyo sebenzisa ubuchule ilandelayo.
Ngelo umgama ukusuka kusimbiwa ecetywayo wemba izithuba ngomthi, ngamaqela amabini (castoffs). Baziqinisa ibhodi tye, leyo ukutsala nezintya. Iibhodi zama ukulungisa kwinqanaba elinye kunye nabanye.
Ngokushukumisa ngeentambo, ukuphumeza yokumakisha ngqo. Ezi uphose-offs ukusetyenziswa kwixesha elizayo kunye ngqo formwork komcu lesiseko.
Kube lula inqanaba umsebenzi, theodolite, laser tape umlinganiselo okanye kwinqanaba laser.
Kunye entsimini buthathaka okanye ubunzulu enkulu ukombiwa ingqalelo ekhethekileyo ukhuseleko ekumbiwe. Kulo mzekelo, nodonga emhadini musa nkqo kuphela, kodwa eliza - ukuthintela ukuphalazwa umhlaba.
Iindonga kunye nasezantsi yolawulo kwinqanaba nomgongxo kaloliwe elide ngokwaneleyo.
Control we geometry.
Kuba angle oluchanileyo 90 kukho ulwamkelo enye. Triangle kunye macala 3:4:5 m (okanye amacala ukuba ziziphindwa kwala manani) umntu unendima engile 90. Kungabekwa phezu kwelinye icala engile neemitha 3, kwelinye - 4 kwaye umgama phakathi amanqaku kufuneka kanye 5 seemitha.
ikhaya Imilinganiselo imiqadi tywe uphahla Abat I-ofaka mansard uphahla hip sixhaso Wood izinyuko ngqo kumtya ngezinyuko ngqo Saddle Ngezinyuko kunye° 90 Ngezinyuko kunye° 90 kunye nezigaba berotary Ngezinyuko kunye 180° ujikelezo Ngezinyuko zijikeleziswe 180° kunye nezigaba berotary Ileli ngemigama ezintathu Ileli ngezipani ezintathu kunye nezigaba berotary ngezinyuko kwamagqabi metal ngezinyuko Metal izinyuko kunye egosogoso wesaphetha Metal ngezinyuko kunye° 90 Metal ngezinyuko kunye° 90 egosogoso wesaphetha Metal ileri 180° ujikelezo Metal ngezinyuko zijikeleziswe 180°, kunye kwisaphetha egosogoso ngezinyuko eziphathekayo umhlube isiseko isiseko pier isiseko esizi amakhonkco eziphathekayo Iizilebhu Indawo eyimfama ukubalwa ezixwesi- Ukwakhiwa eziphathekayo amaplanga izifakelelo iithayile zesiramikhi Isichumisi plasterboard lodongo Ayanda izinto sheet grilles metal ngomthi isakhelo eludongeni Materials Materials kumgangatho Decking Stone Ucingo Fence metal Arch ngenxa ipikethi kocingo imigangatho Self-sokulinganisa Visors ndawo yomhlaba umsele kakuhle umthamo umjelo Turf echibini olubuxande kumbhobho umthamo Umthamo itanki umphanda umthamo Umthamo itanki buxande Isixa lesanti okanye igrabile ezikwimfumba greenhouse greenhouse semicircular isakhiwo ababambe Ukukhanyisa kwegumbi impahla calculator mboleko